Google na-ebupụta nsụgharị ikpeazụ nke gam akporo Auto na ya redesign | Gam akporosis
N'ikpeazụ dị ọhụrụ gam akporo Auto interface
Kemgbe Google ga-ekwuputa mbata nke gam akporo Auto Auto interface na May, ọ nọ na-eche gị jiri ọchịchọ. Taa, etinyela ya maka ọ theụ nke ọtụtụ ma wee nwee ike ịnwale ya mgbe ha na-aga njem ụbọchị ndị a n'oge izu ụka.
Ihe aghaghi ime ka o doo anya interface dị nnọọ ka nnukwu G kwuru na may, Ya mere, ihe ị na-echere na-abịarute ebe a na ntinye nke ụdị ọhụrụ nke gam akporo Auto, ngwa ahụ zuru oke iji kwadebe mkpanaka anyị iji soro ya soro ụgbọ ala wee bụrụ onye ndu njem anyị kacha mma.
1 Kedu ozi kachasị mkpa banyere gam akporo Auto?
2 The redesign nke interface
Kedu ozi kachasị mkpa banyere gam akporo Auto?
Ikekwe ị na-eleghara ndị niile na ozi ọma na-abịa na ọhụrụ interface na redesign nke a ngwa. Ya mere, ka anyị gawa iji chịkọta ha n'usoro isiokwu a dị mkpa:
Bido njem ngwa ngwa: A gam akporo Auto ga-amalite ozugbo oge ịmalitere ụgbọ ala gị na ọ ga - eme ya n'ụzọ ọ ga - amalite ịkpọghachi akpaghị aka nke ọdịnaya multimedia ma gosipụta ngwa igodo kachasị amasị iji gaa ebe ị na - aga.
Banyere gị ngwa pinned: ekele ọhụrụ gam akporo Auto interface ị nwere ike ịchọta ọhụụ igodo ọhụụ nke ị ga-enwe ike ihu ọhụụ gị na-ejikwa ngwa ọdịnala kachasị amasị gị site n'otu ebe ahụ. Nke na - eduga na ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
Igodo obere mkpirisi: na ogwe igodo ohuru i gha enwe ike ime karie igodo obere ihe. Nwere ike ịnata oge ọzọ ị ga - eme, tufuo pọdkastị gị ma ọ bụ nata oku ozugbo site na iji obi iru ala.
Jikwaa nkwukọrịta gị n'ụzọ dị mfe- Ebe ngosi ọhụrụ ahụ na-egosi oku na nso nso a, ozi na ịdọ aka ná ntị ka ị nwee ike ịzaghachi, hụ ma gee ntị ozugbo n’emefughị ​​oge nke abụọ, meziwanye nchekwa gị n’azụ ụzọ.
Akara agba agba dị mma maka anya gị: Emegharịrị gam akporo Auto iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịghọta ihe dị iche iche UI dị iche iche nke interface ma si otú ahụ kewaa onye ọ bụla n'ime ha iji lebara onye ọ bụla anya mgbe ọ bụla ịchọrọ ya. Isi okwu gbara ọchịchịrị nke nwere ụda agba na-acha akwụkwọ ndụ na ihe odide dị mfe ọgụgụ bụ abụọ n'ime isi ihe ya.
Ihuenyo nke dabara n'ụgbọala niile: Ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara gị ịnwe ụgbọ ala nwere nnukwu ihuenyo, ugbu a gam akporo Auto na-agbanwe n'ụzọ dị na ihuenyo ahụ ga-egosi ozi karịa obere. Na ndị ọzọ okwu, ọ adapts zuru oke na akụkụ nke ụgbọ ala gị na ihuenyo.
The redesign nke interface
Google emeela interface iji nweta nhazi nke ụgbọ ala ụgbọ ala. nke kacha gbaa ọchịchịrị, ya mere ugbu a, gam akporo Auto interface na-achọ okomoko na ime ahụ.
Ejiri njirimara interface gosipụta ozi niile dị mkpa na ihuenyo. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na inwere ihe ọkpụkpọ na-arụsi ọrụ ike, ị ga-ahụ ozi niile dị na ogwe ụzọ igodo na ala. Na Google Maps, otu ihe ahụ na-eme na ozi kachasị mkpa n'otu ebe.
Ihe ngosi gam akporo ohuru agbanweela ndepụta nke ngwa kama ọkwa. Yabụ na ha niile nọ na ebe ngosi ọhụrụ ahụ nke anyị ga-enweta n'oge ụfọdụ.
Na nkenke, ahụmịhe ọhụụ maka sistemụ igodo nke ụgbọ ala gị na gam akporo Auto na-enye ahụmịhe ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ na nkasi obi. ekwekwala ka ụzọ ahụ pụọ. Kedu nke bụ ihe sistemụ ndị a agaghị amanye anyị, ebe ọ bụ na nke a pụtara nchekwa anyị n'azụ ụkwụ.
Ị nwere ike budata APK iji nwaa ịnata ọhụụ gam akporo Auto Auto site na ihe nkesa ma si otu a na-ejere gi ozi ohuru ohuru nke uzo a na ihe Google.
Gam akporo Auto: Budata ngwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'ikpeazụ dị ọhụrụ gam akporo Auto interface
Black Shark 2 Pro: Xiaomi ọhụrụ ama egwuregwu
Chọta ebe obibi maka ụdị nnụnnụ dị iche iche na Bird bnb